आज जोर्डनसँग भिड्दै नेपाल, कस्तो छ जोर्डन ?
7th June, 2021 Mon ११:३५:२१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । विश्वकप ०२२ र एसिया ०२३ को छनौटका लागी आज बेलुकी ९ः ४५ बजे नेपालले जोर्डनसँग भिड्न लागिरहेको छ ।
जोर्डन फिफा वरियतामा नेपालभन्दा ७६ स्थान माथि छ । जोर्डन ९५ औं र नेपाल १७१ औं स्थानमा छन् । नेपालभन्दा बलियो टोली जोर्डनसँग छनोटकै अवे खेलमा नेपाल ३–० ले पराजित भएको थियो भने आजसम्म जोर्डनलाई पराजित गर्न सकेको छैन । एसिया कपको सिधै तेस्रो चरणमा छनोटका लागी यो खेलमा नेपालले जित्नैपर्ने दवाव छ ।
कोरोना महामारीले गर्दा करिब १८ महिना रोकिएको एसियाली छनोट फेरि सुरु हुँदा जोर्डनको यो पहिलो खेल हुनेछ । समूह ‘बी’ का खेलहरु न्युट्रल भेन्युको रुपमा कुवेतमा भइरहेको छ । नेपालले यसअघि चाइनिज ताइपेईलाई २–० ले पराजित गर्दै आत्मविश्वास बढाएको छ ।
आषाढ़ १० गते, २०७८ - ०३:१७
काठमाडौं । युरोकप अन्तर्गतको बुधबार राति भएको डेथअफ ग्रुप मानिएको समुहको खेलमा फ्रान्स र पोर्चुगलले २–२ को रोमान्चक बराबरी खेलेका छन् । एकै खेलमा ...
आषाढ़ १० गते, २०७८ - ००:२८
काठमाडौं । स्पनेमा समुहचरणको खेलमा शानदार पुनरागमनसहित अन्तिम १६ का लागी स्थान पक्का गरेको छ । यसअघि भएको पोल्याण्ड र स्विडेनसँगको खेलमा अंक बाडेर...
आषाढ़ ७ गते, २०७८ - १०:३२
किन आकस्मिक बस्यो माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक !
काठमाडौं । आकस्मिकरुपमा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकले यसअघि एमालेमा प्रवेश गरेका राम बहादुर थापा बादल सहित २३ जनालाई गरेको कारवाही अनुमोदन गरेक...
आषाढ़ ७ गते, २०७८ - १०:२४
सिमिकोट । जिल्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–३ कारङ्गा गाउँका सात घर परिवार पहिराको उच्च जोखिम बढेसँगै बसाइँ सरेका छन् । कारङ्गामा बस्दै आएका २० घरधुरीमध्य...
आषाढ़ ७ गते, २०७८ - ०९:२२
काठमाडौं । आज विश्व योग दिवस मनाइँदै छ । यो दिवस हरेक वर्षको जुन महिनाको २१ तारिखमा मनाउने गरिन्छ । यो दिवस सन् २०१४ बाट मनाउन सुरु गरिएको हो । सन्...
आषाढ़ ७ गते, २०७८ - ०८:३५
भेरी अस्पतालमा चिकित्सक र नर्समाथि कुटपीट गर्ने धरौटीमा रिहा
बाँके । भेरी अस्पतालमा आफन्तको मृत्यु भएपछि चिकित्सक र नर्समाथि कुटपीट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका तीनजना धरौटीमा रिहा भएका छन् । आइतबार बाँके जिल्ला...
आषाढ़ ७ गते, २०७८ - ०७:४६
काठमाडौं । गएराति भएको युरोकप अन्तर्गतको समुहचरणको खेलमा इटाली समुहचरणको विजेता हुँदै अन्तिम १६ मा उक्लिएको छ । इटालीसँग पराजित वेल्सले अन्तिम १६ ...
आषाढ़ ७ गते, २०७८ - ०७:२७
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रीपरिषदको अर्को निर्णय पनि खारेज गरेको छ । गत जेठ १३ गते सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण ...
आषाढ़ ६ गते, २०७८ - १७:३५
निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली
आषाढ़ ६ गते, २०७८ - १७:००
लुम्बिनि । विपक्षी दलहरुले लुम्बिनी प्रदेश सभाको आइतबार बसेको बैठक बहिस्कार गरेका छन् । अल्पमत परेको सरकारले ल्याएको बजेटको बिरोध गर्दै गठबन्धनमा र...